Ciidanka dawladda Federalka oo qabsaday magaalada Garbahaarey, Gedo. – Radio Daljir
Ciidanka dawladda Federalka oo qabsaday magaalada Garbahaarey, Gedo.
Abriil 28, 2011 12:00 b 0
Garbahaarrey, April, 28 – Ciidamada dawladda federalka ah ee Somaliya oo taageero ka helaya ururka Ahlu-sunna ayaa maanta la wareegay degmada Garbahaarrey oo ah xurunta gobolkaasi Gedo, wararka ayaa sheegaya in arrintani timid dagaal muddo kooban socday oo dawladda Shabaabka ku dhexmaray halkaasi.
Si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi balse goob jooga-yaal ayaa Daljir u sheegay in daaglku gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh, balse ma cadda tirada dhabta ah.
Shalay dagaal xooggan ayaa dawladda Xarakada Al-shabaab ku dhexmaray tuulada la yiraahdo Barwaaqo oo 20KM u jirta Garbahaarrey, waxaana maamulka gobolkaasi uu sheegay inay dileen in ka badan 20 qof oo ka tirsan Al-shabaab, balse ma jiro war arrintaasi la xiriira oo ka soo baxay Shabaabka.
Wixii wararkaasi ku soo kordha kala soco Daljir.com
“Guddiga doorashooyinka iyo go?aanka xukuumadduba waa sharci darro” Prof. Dalxa oo ka mid ah Guddi baarlamaani ah oo loo saaray arrinta.